Dengue - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
All Articlesကလေးကနျြးမာရေးကိုယျဝနျဆောငျနှငျ့မိခငျ ကနျြးမာရေးကူးစကျတတျသောရောဂါမြားအထှထှေရေောဂါမြား
‘‘ ဟိုဟာ လေးက ပနျးပနျလကျြပါ ’’
‘‘ဒေါကျတာရေ သားလေး ဒီ မနကျ စ, ဖြားတယျ။ ဟိုဟာ ဖွဈနပွေီ ထငျတယျ’’
‘‘သမီးလေး ဖြားပွီး နှာစေး, ခြောငျးဆိုးဖွဈနတော သုံးရကျရှိပွီ။ ဟိုဟာလား မသိဘူး ’’
‘‘ကလေးက အနျပွီး ဝမျးလြှောလို့ ’’ ဟို ဥစ်စာလားလို့ စိတျပူနတေယျ’’
စသညျဖွငျ့ စသညျဖွငျ့ ‘‘ဟိုဟာ’’ ‘‘ဟိုဥစ်စာ’’ ‘‘ဟိုဒငျး’’ နှငျ့ ‘‘ဟိုလောကကွီး’’ ဖွဈ နသေညျမှာ ကွာပါပွီ။ နှဈလေး
ဆယျကြျော ပါပွီ ယခုလညျး ပနျးပနျဆဲပါ။ သူ့ကို နညျးမြိုးစုံ ဖွငျ့ တိုကျထုတျခဲ့ကွပါသညျ။ အောငျမွငျသငျ့သလောကျ
အောငျမွငျခဲ့သျောလညျး။ နောကျ တဈနညျးတဈဖုံဖွငျ့ ပွနျလညျထကွှလာသညျသာ။ နညျးတဈမြိုးဖွငျ့ တိုကျထုတျလိုကျ၊
နောကျ နညျးတဈဖုံဖွငျ့ ပွနျလာလိုကျနှငျ့ အတိုကျအလာ သံသရာကွီးကား ဝဲသွဃကွီးပမာလညျပတျ လကျြ ရှိနပေါသညျ။
တိုကျခိုကျသညျ့ အပိုငျးက လိုအပျနသေလော? သညျလိုလညျး မဟုတျ ပေ။ ကမ်ဘာ့စံခြိနျမီ စနဈတဈကတြိုကျထုတျနပေါသညျ။
တဈကြော့ပွီး တဈကြော့ဝငျလာသညျ့ အပိုငျးက, အားကွီးနသေလော? အားကွီးသညျဟု မဆိုသာသျောလညျး၊ ပုံစံမြိုးစုံ
နညျးအဖုံဖုံ ဖွငျ့ မရိုးနိုငျအောငျ ရောသမ မှနေသေညျမှာ ကွာလှပေါ့၊ ကွာလှပေါ့။
ထို ‘‘ဟိုဟာ’’ ၊ သညျ ‘‘ဟိုဒငျး’’ ဖွငျ့ တဈဟိုဟိုကို လူတိုငျး ကွောကျကွသညျ။ ထိတျလနျ့ကွသညျ။ အသံပငျ မကွားလိုကွပေ။
အသကျအရှယျ မရှေး၊ ဆငျးရဲခမျြးသာ မရှေး၊ ယောကျြားမိနျးမ, မရှေး၊ လူမြိုး ဘာသာမရှေး၊ တဈညီတဈညှတျတညျး ကွောကျကွ သညျသာ။
ဘာကွောငျ့ ပနျးပနျနဆေဲလဲ ?
ကနျြးမာရေး ဝနျထမျးတိုငျး ‘‘ဟိုဟာ’’ အကွောငျး ကောငျးကောငျးသိကွပါသညျ။ မကွာခဏလညျး ဉာဏျသဈလောငျး
သငျတနျးမြား၊ နိုငျငံတဈကာ အစညျးအဝေးမြား၊ စသညျ ဖွငျ့ ကနျြးမာရေးဝနျးထမျး အဆငျ့ဆငျ့ကို အားမှေး ပေးနပေါသညျ။
ကလေးဘမိဘမြားလညျး ထို ‘‘ဟိုဒငျး’’ အကွောငျး သိသငျ့သလောကျ သိကွပါသညျ။ ကလေး မိဘဟု အထူးပွု၍ တိုကျပှဲဆငျ
စမွဲပငျ။ ကလေးမြားကို ဒုက်ခပေးသညျသာမက အသကျအန်တရာယျကိုပငျ ဖွဈစေ ပါသညျ။ ‘‘ဟိုဟာ’’ သညျ မာယာလကျနကျ
လှနျထကျမွတျပွီး အဖကျဖကျမှ ပုံစံမြိုးစုံဖွငျ့ တိုကျ စဈဆငျနသေညျမှ မရိုးနိုငျအောငျပငျ။ ကလေးမြားသညျ ‘‘ဟိုဟာ’’
၏ ပုံမှနျလက်ခဏာဖွငျ့ ဖွဈပှားလြှငျ မိဘမြားသညျ စောစီးစှာ သိကွသညျပငျ။ သို့ဆိုလြှငျ လိုအပျသော ကုသခကျြမြား
အလငျြအမွနျပွုလုပျနိုငျပွီး ကလေးလညျး အန်တရာယျကငျးမညျသာ ဖွဈပါသညျ။ သို့ရာတှငျ ပွဿနာမှာ ပုံစံ လက်ခဏာ အမြိုးမြိုးဖွငျ့
လိုကျ၍ မမီအောငျ ထူးခွားဆနျးပွားနေ သဖွငျ့ ဆရာဝနျမြား၊ မိဘမြားကို နညျးမြိုးစုံဖွငျ့ လှညျ့စားနပေါတော့သညျ။
ရှေးဦးစှာ လူထုကနျြးမာရေးဆိုငျရာ လှညျ့ကှကျမြားကို ဖျောပွပါမညျ။ ယခငျက ‘‘ဟိုဟာ’’ သညျ မိုးရာသီ၏ ရောဂါဟုသာ
လူသိမြားခဲ့ပါသညျ။ အကွောငျးမှာ၊ ထိုရောဂါ ကို ဖွဈစသေော ဗိုငျးရပျဈပိုးတို့ကို သယျဆောငျပေးသော ခွငျကြားတို့သညျ
မိုးရာသီတှငျ ပေါကျ ဖှားပှားမြားကွသောကွောငျ့ ဖွဈပါသညျ။ ယခုနောကျပိုငျးတှငျကား ‘‘ဟိုဟာ’’ သညျ ရာသီ၏
ကိုယျစားလှယျ စဈစဈ မဟုတျတော့ပဲ၊ တဈနှဈပတျလုံး သတိထားစရာ ရနျသူတျောကွီး ဖွဈလာ ပါတော့သညျ။ သူသညျလညျး
ပိတောကျပနျးကဲ့သို တဈနှဈ တဈလ၊ တဈလတှငျ တဈ ရကျ၊ ပှငျ့သညျ မဟုတျတော့ပဲ၊ တဈနှဈတှငျ သုံးလေးကွိမျမြှ ပှငျ့သကဲ့သို့၊
သစ်စာတရား လကျကိုငျမထားတော့လသေလားကှယျ။ ခွငျမြား တဈဆယျ့နှဈလရာသီ ပေါကျဖှား၍ ပငျလား? ဗိုငျးရပျဈပိုးမြား၏
ပေါကျဖှားမှု ပွောငျးလဲသှား၍ပငျလား? ဘာလား? ညာလား? နောကျပွဿနာ ‘‘ဟိုဟာ’’ သညျ လှနျခဲ့သော နှဈပေါငျး
လေးဆယျကြျောက မွနျမာ နိုငျငံသို့ ခဉျြးနငျးဝငျရောကျခါစတှငျ ‘‘မွို့ကွီးသားရောဂါ’’ ဟု သာ ဆိုရပါမညျ။ မွို့ကွီးမြား
တှငျသာ ဖွဈလရှေိ့ပွီး၊ တောရှာမြားတှငျ ဖွဈလမေ့ရှိပေ။ ကိုကျသညျ့ ခွငျကြားကလညျး လူရှေး၍ ကိုကျသညျဟုပငျ
ဆိုရလမေညျလားမသိ။ အာဟာရပွညျ့ဝ၍ ခဈြစဖှယျ ကလေးမြား ကိုသာ ရှေး၍ ကိုကျသဖွငျ့ ထိုကလေးမြား ‘‘ဟိုဟာ’’
အဖွဈမြားကွပါသညျ။ ယခု နောကျပိုငျး တှငျမူ ‘‘ဟိုဟာ’’ သညျ တောရှာအရောကျ ခရီးပေါကျနပွေီး၊ ခွငျကြားဦးရနေညျး
ပါးလှသညျ ဟု ဆိုထားသော တောငျပျေါဒသေအထိ နယျခြဲ့နပေါတော့သညျ။ အာဟာရပွညျ့သော ကလေးကိုသာ
မကိုကျတော့ပဲ၊ လူတနျးစားကှဲပွားမှု မရှိ၊ ပိနျပိနျ ၀၀၊ ခမျြးသာဆငျးရဲ မခှဲတော့ပဲ အားလုံးကို မြှမြှတတ ကိုကျပါတော့သညျ။
သို့ဖွဈ၍ ရောဂါဖွဈသညျ့ ဘောငျသညျ လှနျစှာကယျြဝနျးလာသောကွောငျ့ပငျ အသအေပြောကျမြားလသေညျလား မဆိုနိုငျပေ။
အထကျပါ အခကျြအလကျမြားသညျ လူထု ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ လှညျ့ကှကျမြား ဖွဈပါသညျ။
ရောဂါ၏ ပုံမှနခလက်ခဏာအရ ကိုယျပူကိုပူရပါမညျ။ ကိုယျမပူလြှငျ ‘‘ဟိုဟာ’’ မဟုတျ ဟုပငျ ဆိုရမလောကျ
ကိုယျပူခွငျးသညျ အရေးကွီးပါသညျ။ ရောဂါဖွဈသူ ရာနှုနျးပွညျ့တှငျ ကိုယျပူသညျ သာမက၊ ကိုယျပူကွီးကွပါသညျ။
ခပျနှေးနှေးပူခွငျးမဟုတျပါ။ ကိုယျပူလြှငျလညျး အောကျထကျသုံးရကျမှ ငါးရကျပူကွပါသညျ။ တဈခဏဖွငျ့ ကသြှားသော
အဖြားမဟုတျပါပေ။ ကိုယျပူကဆြေး တိုကျလြှငျလညျး ဆေး၏ အာနိသငျကုနျလြှငျ အဖြားပွနျတကျစမွဲပငျ။ ဗိုငျးရပျဈပိုးမြား
သှေးကွောမြားတှငျ ပြံ့နှံ့နခြေိနျတှငျ ကလေးသညျ ခမျြးတုနျ၍ ဖြားတတျပါ သညျ။ ထိုအခါ ငှကျဖြားသငျ၍ ငှကျဖြားအတှကျသာ
ဦးစားပေး၍ ကုသပါတော့သညျ။ လှဲပွနျပါ ခပြွေီ။
ယခုနောကျပိုငျးတှငျမူ မန်ခာကိုယျအတှငျးသို့ ဗိုငျးရပျဈပိုးဝငျနှုနျးမြား၍လား၊ ကလေး မြား၏ ခုံခံမှုအားတို့ နညျးလာ၍လား
၊ ကလေးမြား၏ ခုံခံမှုအားတို့နညျးလာ၍လားမသိ၊ နရေ့ောညပါ ခမျြးတုနျ၍ ဖြားကွပါသညျ။ ယခငျက, လို ရံခါ ခမျြးတုနျခွငျးမှာသာ
မရပျတံ့ တော့ပေ။ ထိုအခါ ငှကျဖြားဖွဈသညျဟူသော ခံယူခကျြတို့က ပို၍ မွဲလာပွနျပါသညျ။ ကုသမှု လှဲရပွနျပါပွီ။ ငှကျဖြားနှငျ့
ဒှနျတှဲ၍ ‘‘ဟိုဟာ’’ ဖွဈလြှငျမူ ကလေး ကံကောငျးနိုငျပါသညျ။ အရေးကွီသော အင်ျဂါမြား၊ ဥပမာ အသညျး၊ နှလုံး စသညျတို့မှ
သှေးယိုခွငျးတို့မှာ ဖွဈခဲလှ ပါသညျ။ ဖွဈလြှငျလညျး ဖြားပွီး နောကျပိုငျးရကျတျောတျောကွာမှ ဖွဈလရှေိ့ကွပါသညျ။
ယခုအခါတှငျမူ ရောဂါ အစ, ပိုငျးတှငျ နရောတဈကာမှ သှေးယိုသော လက်ခ အစ, ပိုငျးတှငျ နရောတဈကာမှ သှေးယိုသော
လက်ခဏာမြား ပွတတျပါသညျ။ ထိုအခါ သှေးနှငျ့ ပတျသကျသော ရောဂါမြားလားဟူသော သံသယမြားဝငျလာတတျပါသညျ။
အရပွေားတှငျ လညျး အရပွေားအောကျတှငျ အနီစကျထှကျရုံသာမက၊ အရပွေားပျေါတှငျလညျး အငျပဉျြ အသှငျ အနီဖုမြားလညျး
ပျေါလာတတျသဖွငျ့ ဝကျသကျရောဂါနှငျ့ မှားတတျပွနျပါသညျ။ မာယာ သခငျမ, လေး ‘‘ဟိုဟာ’’ ပါကလား။
‘‘ဟိုဟာ’’ စဈစဈ ဖြားပွီး သှေးယိုခွငျးသာ လက်ခ အမှနျဟု ပညာရှငျတို့ ဆိုခဲ့ကွပါ သညျ။ ဖြားလညျးဖြား၊ နှာယိုခြောငျးဆိုး
လညျး ဖွဈဆိုလြှငျ အသကျရှုလမျးကွောငျးပိုးဝငျသညျ ဟုသာ သတျမှတျခဲ့ကွပါသညျ။ နှာယိုခြောငျးဆိုးရှိလာလြှငျ ‘‘ဟိုဟာ’’
မဟုတျဘူးဟုပငျ အာမခံခဲ့ကွပါသညျ။ ယခုမူ ‘‘ဟိုဟာ’’ သညျ တုပျကှေး ရောဂါ(Influenga) ဆနျဆနျ ဖြားလညျးဖြား၊
ကိုယျလကျကိုကျခဲ၍ နှာနညျးနညျးယို၊ ခြောငျးလေးလညျး ဆိုးလို့ပါလား။ သို့ဆိုလြှငျ ‘‘ဟိုဟာ’’ မဟုတျဘူး ဟု ဆရာဝနျက
ကိုယျပူပွီး နှဈရကျ သုံးရကျ မွောကျနတှေ့ငျ ကလေးက ဗိုကျနာသညျဟု ဆိုလြှငျ ပေါ့ပေါ့ဆဆ ခံယူ၍ မရပေ။ လနောတာပါ၊
သနျထတာပါ ဟု အထငျရှိပွီး ဆေးမွီတိုဖွငျ့ ကုလြှငျ မရဏမငျး ကို လကျယပျချေါလိုကျသညျနှငျ့ အတူတူပငျ။ ရောဂါ၏
ဖွဈစဉျအရ ဖြားပွီး နှဈရကျသုံးရကျ ဆိုလြှငျလညျး အသညျးကွီးလာတတျပါသညျ။ အသညျးကွီးလာခွငျးသညျ သှေးလနျ့ခွငျး
(Shock) ဖွဈလာနိုငျသညျ ဟု ဆိုလိုပါသညျ။ သို့ဖွဈ၍ ကိုယျပူပွီး ဗိုကျနာလြှငျ ဆရာဝနျထံ အမွနျပွသငျ့ပါသညျ။ ကိုယျပူခွငျးကို
ဦးစားမပေးပဲ၊ ဗိုကျနာခွငျးကိုသာ ဦးစားပေး၍ ပွောလြှငျလညျး ဆရာဝနျသညျ အူအတတျပေါကျခွငျး၊ အူပိတျခွငျးအစရှိသညျ့
ခှဲစိတျရမညျ့ ရောဂါမြား အကွောငျးသာ အာရုံရောကျသှားတတျပါသညျ။ ကိုယျပူခွငျးနှငျ့ ဗိုကျနာခွငျးကို တှဲ၍ ပွောရပါမညျ။
ဆရာဝနျကလညျး ကိုယျပူပွီးဗိုကျနာတာလား၊ ကိုယျမပူပဲ နာတာလား၊ ဗိုကျဈမညျသညျ့ အပိုငျးမှ နာသညျလဲ စသညျဖွငျ့
သခြောစှာ မေးမွနျးစမျးသပျရပါမညျ။ မြားသောအားဖွငျ့ အသညျးတညျရှိသော နရောဖွဈသညျ့ ဝမျးဗိုကျအထကျပိုငျး ညာဖကျက
နာတတျအောငျ့တတျပါသညျ။ ရံခါ ဝမျးဗိုကျအထကျပိုငး ဘယျဖကျနှငျ့ အလယျ ဖကျတို့ အောငျ့တတျပါသညျ။ အကွောငျးမှာ
အစာအိမျမှ သှေးယို၍သျောလညျးကောငျး၊ အသညျး၏ ဘယျဖကျအခွမျးကွီးလာလြှငျ သျောလညျးကောငျး၊ ဤသို့
‘‘ရငျခေါငျး အောငျ့သညျ’’ ဟူသော ဝဒေနာ သညျ ယခုနောကျပိုငျးတှငျ အဖွဈမြားလာပါသညျ။ အစာ အိမျရောငျသညျ၊
အစာ အစာအိမျ အနာပေါကျသညျ ဟု ရံခါ အထငျမှားတတျကွပါသညျ။
ယခုနောကျပိုငျးတှငျ မာယာလမျးကွောငျး အသှငျပွောငျးပွနျပါပွီ။ ကလေးသညျ ဖြားပွီး သှေး မယိုသေးပဲ အနျတတျကွပါ
သညျ။ ဖြားပွီး အနျသောကွောငျ့ ဦးနှောကျရောငျခွငျး၊ ဦးနှောကျ အမွှေးပါးရောငျခွငျး စသညျတို့မြားလားဟု အတှေးမှားကွ
ရပွနျပါသညျ။ ကျောဖီနှဈရောငျ အနျ လြှငျအစာလမျးကွောငျး သှေးယိုသညျ့ လက်ခဏာဖွဈကွောငျး ပွောနိုငျပါသညျ။ သို့ ဆိုလြှငျ
သှေးလှနျတုပျကှေးဖွဈသညျမှာ သခြောသလောကျ ဖွဈပါသညျ။ သို့ရာတှငျ အစာ အရညျမြားသာ တရစပျ အနျလြှငျမူကား
ဝမျးပကျြဝမျးလြှောလလေား? ဦးနှောကျပိုငျးဆိုငျရာ ရောဂါလား? ဟူ၍၊ လားပေါငျးမြားစှာ စဉျးစားကွရပွနျပါသညျ။ကလေးသညျ
စဖြားသညျ့ ပထမနတှေ့ငျ ကိုယျပူကွီးလြှငျ တတျတတျပါသညျ။ အထူး သဖွငျ့ အသကျ (၆) လ နှငျ့ (၆) နှဈ အကွား ကလေးမြားတှငျ
အဖွဈမြားတတျကွပါသညျ။ ဖြားပွီး နှဈရကျ သုံးရကျကွာတှငျလညျး ဦးနှောကျရောငျတတျသဖွငျ့ တတျကွပါသညျ။ ထိုသို့သော
သဘောတို့ကို မသိလြှငျ‘‘ဟိုဟာ’’ ရောဂါ၏ လှညျ့စားခွငျးကို ခံရမညျကား ဧကနျမုခပြငျ။
အထကျဖျောပွခဲ့သညျ့ အတိုငျး ပုံစံမြိုးစုံ၊ မူဟနျသှယျသှယျ ထိုးနှကျနသေညျ့ ‘‘ဟိုဟာ’’ တညျး ဟူသော
‘‘သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါ’’ သညျ ‘‘ဗဒေါပြံ အနျကိုခဲ ပနျးပနျလကျြပဲ’’ ဟု ဆို ရမလောကျဖွဈနပေါသညျ။ ဖွဈမွဲ ရောဂါ
လက်ခမြားတညျးဟူသော ဘဲအုပျ တဈရာနှဈရာကို အနျတုလကျြသာလှနျ ဆနျးပွားသော လက်ခမြားကွောငျ့ ကလေးသူငယျမြား
ကို ခွောကျလှနျ့ ပွီး ပနျးပနျနပေါသဖွငျ့ ဆရာဝနျမြားရော၊ မိဘမြားပါ သတိထားနိုငျရနျ တငျပွလိုကျရခွငျး ဖွဈပါသညျ။
ဒေါကျတာ ယုဇနစောမွငျ့ (ကလေးအထူးကုဆရာဝနျကွီး)
‘‘ ဟိုဟာ လေးက ပန်းပန်လျက်ပါ ’’
‘‘ဒေါက်တာရေ သားလေး ဒီ မနက် စ, ဖျားတယ်။ ဟိုဟာ ဖြစ်နေပြီ ထင်တယ်’’
‘‘သမီးလေး ဖျားပြီး နှာစေး, ချောင်းဆိုးဖြစ်နေတာ သုံးရက်ရှိပြီ။ ဟိုဟာလား မသိဘူး ’’
‘‘ကလေးက အန်ပြီး ၀မ်းလျှောလို့ ’’ ဟို ဥစ္စာလားလို့ စိတ်ပူနေတယ်’’
စသည်ဖြင့် စသည်ဖြင့် ‘‘ဟိုဟာ’’ ‘‘ဟိုဥစ္စာ’’ ‘‘ဟိုဒင်း’’ နှင့် ‘‘ဟိုလောကကြီး’’ ဖြစ် နေသည်မှာ ကြာပါပြီ။ နှစ်လေး
ဆယ်ကျော် ပါပြီ ယခုလည်း ပန်းပန်ဆဲပါ။ သူ့ကို နည်းမျိုးစုံ ဖြင့် တိုက်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ အောင်မြင်သင့်သလောက်
အောင်မြင်ခဲ့သော်လည်း။ နောက် တစ်နည်းတစ်ဖုံဖြင့် ပြန်လည်ထကြွလာသည်သာ။ နည်းတစ်မျိုးဖြင့် တိုက်ထုတ်လိုက်၊
နောက် နည်းတစ်ဖုံဖြင့် ပြန်လာလိုက်နှင့် အတိုက်အလာ သံသရာကြီးကား ၀ဲသြဃကြီးပမာလည်ပတ် လျက် ရှိနေပါသည်။
တိုက်ခိုက်သည့် အပိုင်းက လိုအပ်နေသလော? သည်လိုလည်း မဟုတ် ပေ။ ကမ္ဘာ့စံချိန်မီ စနစ်တစ်ကျတိုက်ထုတ်နေပါသည်။
တစ်ကျော့ပြီး တစ်ကျော့ဝင်လာသည့် အပိုင်းက, အားကြီးနေသလော? အားကြီးသည်ဟု မဆိုသာသော်လည်း၊ ပုံစံမျိုးစုံ
နည်းအဖုံဖုံ ဖြင့် မရိုးနိုင်အောင် ရောသမ မွှေနေသည်မှာ ကြာလှပေါ့၊ ကြာလှပေါ့။
ထို ‘‘ဟိုဟာ’’ ၊ သည် ‘‘ဟိုဒင်း’’ ဖြင့် တစ်ဟိုဟိုကို လူတိုင်း ကြောက်ကြသည်။ ထိတ်လန့်ကြသည်။ အသံပင် မကြားလိုကြပေ။
အသက်အရွယ် မရွေး၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ မရွေး၊ ယောက်ျားမိန်းမ, မရွေး၊ လူမျိုး ဘာသာမရွေး၊ တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း ကြောက်ကြ သည်သာ။
ဘာကြောင့် ပန်းပန်နေဆဲလဲ ?
ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းတိုင်း ‘‘ဟိုဟာ’’ အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိကြပါသည်။ မကြာခဏလည်း ဉာဏ်သစ်လောင်း
သင်တန်းများ၊ နိုင်ငံတစ်ကာ အစည်းအဝေးများ၊ စသည် ဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်းထမ်း အဆင့်ဆင့်ကို အားမွေး ပေးနေပါသည်။
ကလေးဘမိဘများလည်း ထို ‘‘ဟိုဒင်း’’ အကြောင်း သိသင့်သလောက် သိကြပါသည်။ ကလေး မိဘဟု အထူးပြု၍ တိုက်ပွဲဆင်
စမြဲပင်။ ကလေးများကို ဒုက္ခပေးသည်သာမက အသက်အန္တရာယ်ကိုပင် ဖြစ်စေ ပါသည်။ ‘‘ဟိုဟာ’’ သည် မာယာလက်နက်
လွန်ထက်မြတ်ပြီး အဖက်ဖက်မှ ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် တိုက် စစ်ဆင်နေသည်မှ မရိုးနိုင်အောင်ပင်။ ကလေးများသည် ‘‘ဟိုဟာ’’
၏ ပုံမှန်လက္ခဏာဖြင့် ဖြစ်ပွားလျှင် မိဘများသည် စောစီးစွာ သိကြသည်ပင်။ သို့ဆိုလျှင် လိုအပ်သော ကုသချက်များ
အလျင်အမြန်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ကလေးလည်း အန္တရာယ်ကင်းမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ပြဿနာမှာ ပုံစံ လက္ခဏာ အမျိုးမျိုးဖြင့်
လိုက်၍ မမီအောင် ထူးခြားဆန်းပြားနေ သဖြင့် ဆရာဝန်များ၊ မိဘများကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် လှည့်စားနေပါတော့သည်။
ရှေးဦးစွာ လူထုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လှည့်ကွက်များကို ဖော်ပြပါမည်။ ယခင်က ‘‘ဟိုဟာ’’ သည် မိုးရာသီ၏ ရောဂါဟုသာ
လူသိများခဲ့ပါသည်။ အကြောင်းမှာ၊ ထိုရောဂါ ကို ဖြစ်စေသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတို့ကို သယ်ဆောင်ပေးသော ခြင်ကျားတို့သည်
မိုးရာသီတွင် ပေါက် ဖွားပွားများကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုနောက်ပိုင်းတွင်ကား ‘‘ဟိုဟာ’’ သည် ရာသီ၏
ကိုယ်စားလှယ် စစ်စစ် မဟုတ်တော့ပဲ၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံး သတိထားစရာ ရန်သူတော်ကြီး ဖြစ်လာ ပါတော့သည်။ သူသည်လည်း
ပိတောက်ပန်းကဲ့သို တစ်နှစ် တစ်လ၊ တစ်လတွင် တစ် ရက်၊ ပွင့်သည် မဟုတ်တော့ပဲ၊ တစ်နှစ်တွင် သုံးလေးကြိမ်မျှ ပွင့်သကဲ့သို့၊
သစ္စာတရား လက်ကိုင်မထားတော့လေသလားကွယ်။ ခြင်များ တစ်ဆယ့်နှစ်လရာသီ ပေါက်ဖွား၍ ပင်လား? ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ၏
ပေါက်ဖွားမှု ပြောင်းလဲသွား၍ပင်လား? ဘာလား? ညာလား? နောက်ပြဿနာ ‘‘ဟိုဟာ’’ သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း
လေးဆယ်ကျော်က မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်ခါစတွင် ‘‘မြို့ကြီးသားရောဂါ’’ ဟု သာ ဆိုရပါမည်။ မြို့ကြီးများ
တွင်သာ ဖြစ်လေ့ရှိပြီး၊ တောရွာများတွင် ဖြစ်လေ့မရှိပေ။ ကိုက်သည့် ခြင်ကျားကလည်း လူရွေး၍ ကိုက်သည်ဟုပင်
ဆိုရလေမည်လားမသိ။ အာဟာရပြည့်ဝ၍ ချစ်စဖွယ် ကလေးများ ကိုသာ ရွေး၍ ကိုက်သဖြင့် ထိုကလေးများ ‘‘ဟိုဟာ’’
အဖြစ်များကြပါသည်။ ယခု နောက်ပိုင်း တွင်မူ ‘‘ဟိုဟာ’’ သည် တောရွာအရောက် ခရီးပေါက်နေပြီး၊ ခြင်ကျားဦးရေနည်း
ပါးလှသည် ဟု ဆိုထားသော တောင်ပေါ်ဒေသအထိ နယ်ချဲ့နေပါတော့သည်။ အာဟာရပြည့်သော ကလေးကိုသာ
မကိုက်တော့ပဲ၊ လူတန်းစားကွဲပြားမှု မရှိ၊ ပိန်ပိန် ၀၀၊ ချမ်းသာဆင်းရဲ မခွဲတော့ပဲ အားလုံးကို မျှမျှတတ ကိုက်ပါတော့သည်။
သို့ဖြစ်၍ ရောဂါဖြစ်သည့် ဘောင်သည် လွန်စွာကျယ်ဝန်းလာသောကြောင့်ပင် အသေအပျောက်များလေသည်လား မဆိုနိုင်ပေ။
အထက်ပါ အချက်အလက်များသည် လူထု ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လှည့်ကွက်များ ဖြစ်ပါသည်။
ရောဂါ၏ ပုံမှနခလက္ခဏာအရ ကိုယ်ပူကိုပူရပါမည်။ ကိုယ်မပူလျှင် ‘‘ဟိုဟာ’’ မဟုတ် ဟုပင် ဆိုရမလောက်
ကိုယ်ပူခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ ရောဂါဖြစ်သူ ရာနှုန်းပြည့်တွင် ကိုယ်ပူသည် သာမက၊ ကိုယ်ပူကြီးကြပါသည်။
ခပ်နွေးနွေးပူခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ပူလျှင်လည်း အောက်ထက်သုံးရက်မှ ငါးရက်ပူကြပါသည်။ တစ်ခဏဖြင့် ကျသွားသော
အဖျားမဟုတ်ပါပေ။ ကိုယ်ပူကျဆေး တိုက်လျှင်လည်း ဆေး၏ အာနိသင်ကုန်လျှင် အဖျားပြန်တက်စမြဲပင်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ
သွေးကြောများတွင် ပျံ့နှံ့နေချိန်တွင် ကလေးသည် ချမ်းတုန်၍ ဖျားတတ်ပါ သည်။ ထိုအခါ ငှက်ဖျားသင်၍ ငှက်ဖျားအတွက်သာ
ဦးစားပေး၍ ကုသပါတော့သည်။ လွဲပြန်ပါ ချေပြီ။
ယခုနောက်ပိုင်းတွင်မူ မန္ခာကိုယ်အတွင်းသို့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်နှုန်းများ၍လား၊ ကလေး များ၏ ခုံခံမှုအားတို့ နည်းလာ၍လား
၊ ကလေးများ၏ ခုံခံမှုအားတို့နည်းလာ၍လားမသိ၊ နေ့ရောညပါ ချမ်းတုန်၍ ဖျားကြပါသည်။ ယခင်က, လို ရံခါ ချမ်းတုန်ခြင်းမှာသာ
မရပ်တံ့ တော့ပေ။ ထိုအခါ ငှက်ဖျားဖြစ်သည်ဟူသော ခံယူချက်တို့က ပို၍ မြဲလာပြန်ပါသည်။ ကုသမှု လွဲရပြန်ပါပြီ။ ငှက်ဖျားနှင့်
ဒွန်တွဲ၍ ‘‘ဟိုဟာ’’ ဖြစ်လျှင်မူ ကလေး ကံကောင်းနိုင်ပါသည်။ အရေးကြီသော အင်္ဂါများ၊ ဥပမာ အသည်း၊ နှလုံး စသည်တို့မှ
သွေးယိုခြင်းတို့မှာ ဖြစ်ခဲလှ ပါသည်။ ဖြစ်လျှင်လည်း ဖျားပြီး နောက်ပိုင်းရက်တော်တော်ကြာမှ ဖြစ်လေ့ရှိကြပါသည်။
ယခုအခါတွင်မူ ရောဂါ အစ, ပိုင်းတွင် နေရာတစ်ကာမှ သွေးယိုသော လက္ခ အစ, ပိုင်းတွင် နေရာတစ်ကာမှ သွေးယိုသော
လက္ခဏာများ ပြတတ်ပါသည်။ ထိုအခါ သွေးနှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါများလားဟူသော သံသယများဝင်လာတတ်ပါသည်။
အရေပြားတွင် လည်း အရေပြားအောက်တွင် အနီစက်ထွက်ရုံသာမက၊ အရေပြားပေါ်တွင်လည်း အင်ပျဉ် အသွင် အနီဖုများလည်း
ပေါ်လာတတ်သဖြင့် ၀က်သက်ရောဂါနှင့် မှားတတ်ပြန်ပါသည်။ မာယာ သခင်မ, လေး ‘‘ဟိုဟာ’’ ပါကလား။
‘‘ဟိုဟာ’’ စစ်စစ် ဖျားပြီး သွေးယိုခြင်းသာ လက္ခ အမှန်ဟု ပညာရှင်တို့ ဆိုခဲ့ကြပါ သည်။ ဖျားလည်းဖျား၊ နှာယိုချောင်းဆိုး
လည်း ဖြစ်ဆိုလျှင် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းပိုးဝင်သည် ဟုသာ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ နှာယိုချောင်းဆိုးရှိလာလျှင် ‘‘ဟိုဟာ’’
မဟုတ်ဘူးဟုပင် အာမခံခဲ့ကြပါသည်။ ယခုမူ ‘‘ဟိုဟာ’’ သည် တုပ်ကွေး ရောဂါ(Influenga) ဆန်ဆန် ဖျားလည်းဖျား၊
ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲ၍ နှာနည်းနည်းယို၊ ချောင်းလေးလည်း ဆိုးလို့ပါလား။ သို့ဆိုလျှင် ‘‘ဟိုဟာ’’ မဟုတ်ဘူး ဟု ဆရာဝန်က
ကိုယ်ပူပြီး နှစ်ရက် သုံးရက် မြောက်နေ့တွင် ကလေးက ဗိုက်နာသည်ဟု ဆိုလျှင် ပေါ့ပေါ့ဆဆ ခံယူ၍ မရပေ။ လေနာတာပါ၊
သန်ထတာပါ ဟု အထင်ရှိပြီး ဆေးမြီတိုဖြင့် ကုလျှင် မရဏမင်း ကို လက်ယပ်ခေါ်လိုက်သည်နှင့် အတူတူပင်။ ရောဂါ၏
ဖြစ်စဉ်အရ ဖျားပြီး နှစ်ရက်သုံးရက် ဆိုလျှင်လည်း အသည်းကြီးလာတတ်ပါသည်။ အသည်းကြီးလာခြင်းသည် သွေးလန့်ခြင်း
(Shock) ဖြစ်လာနိုင်သည် ဟု ဆိုလိုပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကိုယ်ပူပြီး ဗိုက်နာလျှင် ဆရာဝန်ထံ အမြန်ပြသင့်ပါသည်။ ကိုယ်ပူခြင်းကို
ဦးစားမပေးပဲ၊ ဗိုက်နာခြင်းကိုသာ ဦးစားပေး၍ ပြောလျှင်လည်း ဆရာဝန်သည် အူအတတ်ပေါက်ခြင်း၊ အူပိတ်ခြင်းအစရှိသည့်
ခွဲစိတ်ရမည့် ရောဂါများ အကြောင်းသာ အာရုံရောက်သွားတတ်ပါသည်။ ကိုယ်ပူခြင်းနှင့် ဗိုက်နာခြင်းကို တွဲ၍ ပြောရပါမည်။
ဆရာဝန်ကလည်း ကိုယ်ပူပြီးဗိုက်နာတာလား၊ ကိုယ်မပူပဲ နာတာလား၊ ဗိုက်စ်မည်သည့် အပိုင်းမှ နာသည်လဲ စသည်ဖြင့်
သေချာစွာ မေးမြန်းစမ်းသပ်ရပါမည်။ များသောအားဖြင့် အသည်းတည်ရှိသော နေရာဖြစ်သည့် ၀မ်းဗိုက်အထက်ပိုင်း ညာဖက်က
နာတတ်အောင့်တတ်ပါသည်။ ရံခါ ၀မ်းဗိုက်အထက်ပိုငး ဘယ်ဖက်နှင့် အလယ် ဖက်တို့ အောင့်တတ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ
အစာအိမ်မှ သွေးယို၍သော်လည်းကောင်း၊ အသည်း၏ ဘယ်ဖက်အခြမ်းကြီးလာလျှင် သော်လည်းကောင်း၊ ဤသို့
‘‘ရင်ခေါင်း အောင့်သည်’’ ဟူသော ဝေဒနာ သည် ယခုနောက်ပိုင်းတွင် အဖြစ်များလာပါသည်။ အစာ အိမ်ရောင်သည်၊
အစာ အစာအိမ် အနာပေါက်သည် ဟု ရံခါ အထင်မှားတတ်ကြပါသည်။
ယခုနောက်ပိုင်းတွင် မာယာလမ်းကြောင်း အသွင်ပြောင်းပြန်ပါပြီ။ ကလေးသည် ဖျားပြီး သွေး မယိုသေးပဲ အန်တတ်ကြပါ
သည်။ ဖျားပြီး အန်သောကြောင့် ဦးနှောက်ရောင်ခြင်း၊ ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်း စသည်တို့များလားဟု အတွေးမှားကြ
ရပြန်ပါသည်။ ကော်ဖီနှစ်ရောင် အန် လျှင်အစာလမ်းကြောင်း သွေးယိုသည့် လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်း ပြောနိုင်ပါသည်။ သို့ ဆိုလျှင်
သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်သည်မှာ သေချာသလောက် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အစာ အရည်များသာ တရစပ် အန်လျှင်မူကား
၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောလေလား? ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါလား? ဟူ၍၊ လားပေါင်းများစွာ စဉ်းစားကြရပြန်ပါသည်။ကလေးသည်
စဖျားသည့် ပထမနေ့တွင် ကိုယ်ပူကြီးလျှင် တတ်တတ်ပါသည်။ အထူး သဖြင့် အသက် (၆) လ နှင့် (၆) နှစ် အကြား ကလေးများတွင်
အဖြစ်များတတ်ကြပါသည်။ ဖျားပြီး နှစ်ရက် သုံးရက်ကြာတွင်လည်း ဦးနှောက်ရောင်တတ်သဖြင့် တတ်ကြပါသည်။ ထိုသို့သော
သဘောတို့ကို မသိလျှင်‘‘ဟိုဟာ’’ ရောဂါ၏ လှည့်စားခြင်းကို ခံရမည်ကား ဧကန်မုချပင်။
အထက်ဖော်ပြခဲ့သည့် အတိုင်း ပုံစံမျိုးစုံ၊ မူဟန်သွယ်သွယ် ထိုးနှက်နေသည့် ‘‘ဟိုဟာ’’ တည်း ဟူသော
‘‘သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ’’ သည် ‘‘ဗေဒါပျံ အန်ကိုခဲ ပန်းပန်လျက်ပဲ’’ ဟု ဆို ရမလောက်ဖြစ်နေပါသည်။ ဖြစ်မြဲ ရောဂါ
လက္ခများတည်းဟူသော ဘဲအုပ် တစ်ရာနှစ်ရာကို အန်တုလျက်သာလွန် ဆန်းပြားသော လက္ခများကြောင့် ကလေးသူငယ်များ
ကို ခြောက်လှန့် ပြီး ပန်းပန်နေပါသဖြင့် ဆရာဝန်များရော၊ မိဘများပါ သတိထားနိုင်ရန် တင်ပြလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဒေါက်တာ ယုဇနစောမြင့် (ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)
Noise glimpse about (1)
Nose Bleed 2